2019 Dziya muna 17th China Nyika Yezvehukama Mhuka Expo-Wuhan
Musi waMay 18, 2019, iyo yechigumi neshanu (2019) China Animal Husbandry Expo uye 2019 China International Animal Husbandry Expo yakavhurwa muWuhan International Expo Center. Iine chinangwa uye chinangwa chehunyanzvi chiri kutungamira mukusimukira kwemaindasitiri, iyo Animal Husbandry Expo icharatidza nekusimudzira tekinoroji nyowani uye zvigadzirwa zvechirimwa chekudyara mhuka kusimudzira kugona nekuvandudza kwemaindasitiri. Chiratidziro chemazuva matatu chinopindwa nemabhizimusi anopfuura chiuru kubva kupasirese epasirese nemasangano epamhuka epamberi ekupfuya mhuka.
Sebhizimusi repamusoro rekuchengetedza mhuka, veDepond boka vagara vachitora basa re “kuchengetedza nekuendesa indasitiri yevarimi”. Pasi pezvinhu zvitsva zvinodikanwa zvekushandurwa uye kusimudzirwa kwemaindasitiri evarimi ekutengesa mhuka, Depond inounza zvimwe zvigadzirwa zvehurongwa zvinoenderana neramangwana rekusimudzira maitiro kuti aoneke mu Animal Husbandry Expo.
"Kunyatsofunga, basa rakanaka, rakakwirira uye rakasvibira" ndiko kungogara kuchigadzirwa kuchitsvaga cheDisond group. Zvigadzirwa zvinoratidzwa pakuratidzira uku hazvisi izvo chete zvinotengesa zvinopisa zvakaedzwa nemusika, asiwo zvigadzirwa zvinyowani zvine zvemhando yepamusoro-soro uye zvakakunda zvikamu zvitatu zvemishonga mitsva yemishonga. Munguva yekuratidzira, vatsva nevekare vehukama vauya kuchiratidziro vakaratidza kufarira kwazvo zvigadzirwa zveDesond, vazhinji vevatengi vatsva vakaratidza chido chavo chekubatana, uye nekuwedzera kushambadzira kuchaitwa mushure memusangano.
Kuratidzira uku hakuzi chete hwindo rinobudirira rekuti boka riratidze simba raro, kuvandudza vatengi nekusimudzira zvigadzirwa, asi zvakare chiero chakakosha chekuti boka rinyatsopinda mumusika uye vanzwisise zvinodiwa neindasitiri uye maitiro epasi rese. Boka revadzidzi vehunyanzvi uye nevamiriri vevatengi vanogara vachichinjanisa pfungwa yekuchengetedza kwakasimba, kunetseka kurima, nyika inotungamira tekinoroji, hunyanzvi uye humwe ruzivo, rwunopa mazano ekutsvaga nekuvandudza gwara uye tekinoroji yekuvandudza zvigadzirwa zveDepond. Mune ramangwana, Depond acharamba achidzamisa zvinodiwa pamusika, dzidzira pfungwa ye "kuperekedza varimi", uye nekupa zvakachengeteka, zvinobudirira uye zvisingadhuri zvigadzirwa zveindasitiri inobereka.
Nguva yekutumira: Chivabvu-26-2020